Ukumisela ixabiso: Ukusebenza kweAmazon amaxabiso ngokuSebenza kunye nokuba kuthatha ixesha elingakanani | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 15, 2016 Lwesine, ngoFebruwari 18, 2016 Douglas Karr
IAmazon ixele ukuba abathengisi abathengisa kwimarike yayo babalwa Iipesenti ezingama-45 zeeyunithi zithengisiwe kwikota yesibini ka-2015, ukusuka kuma-41% kunyaka ongaphambili. Ngezigidi zabathengisi abathengisa iibhiliyoni zeemveliso kwindawo yezorhwebo njengeAmazon, abathengisi bayazuza ngokulungelelanisa amaxabiso abo ukuze bobabini bakhuphisane kwaye babe nokugcina inzuzo. Ukurhafisa sisicwangciso sokusebenzisa ixabiso ukufezekisa ukuthengisa okwandileyo.
Yintoni ukuZenzekelayo ukuHlawula?
Njengakwiinkqubo ezininzi, nangona kunjalo, kunzima ukuqokelela idatha eyimfuneko kwintaba yeemveliso kwaye wandise okanye unciphise amaxabiso ngokuhla nokunyuka phakathi kwabakhuphisana nabo. Zenzekelayo izixhobo zokubuyisa ixabiso ziye zavela njengotyalo-mali olukhulu kubathengisi ukuseta imithetho yabo kunye nokuvumela inkqubo ukuba iguqule amaxabiso njengoko kufuneka.
UmPhengululi weRexpress sesinye sezixhobo, kwaye babeka indlela amaxabiso eAmazon aSebenza ngayo kunye noThatha ixesha elingakanani.
Ukurhweba kuqala xa omnye wabathengisi abaphambili abangama-20 wento echanekileyo etshintsha amaxabiso asebenzayo, ixesha lokuphatha, ixabiso lokuhambisa, kunye nokunikezela.
Amazon ithumela umyalezo kwiRepricerExpress ngexabiso, ukuthumela kunye nolwazi lomthengisi kubathengisi abangama-20 abaphezulu.
UmPhengululi weRexpress Uhlalutyo ulwazi oluphezulu lwabathengisi abangama-20 kwaye uqhuba imilinganiselo yakho ngokuchasene nabo, ubala ixabiso lakho elitsha.
UmPhengululi weRexpress yenza itsheki kwixabiso elitsha ukuqinisekisa ukuba liphakathi kobuncinci (umgangatho) kunye nexabiso eliphezulu (isilingi).
Nje ukuba iqinisekiswe, UmPhengululi weRexpress layisha ixabiso elitsha kwiAmazon ukuze liqhubekeke.
IiAmazon Inkqubo yempazamo yamaxabiso ijonga ixabiso elitsha ngokuchasene ne-akhawunti yakho yomthengisi ophantsi yeAmazon kunye namaxabiso aphezulu.
Nje ukuba ixabiso lakho liqinisekiswe, lidweliswa njengexabiso lakho langoku. Yonke le nto yenzeka ngokuqhubekayo kwisithuba seeyure ezingama-24, iintsuku ezisi-7 ngeveki.
tags: Ukuhlawulwa kweAmazonisixhobo sokubuyisela ixabisoIxabiso lesilingiIxabiso lomgangathoAmaxabiso aphezuluAmaxabiso asezantsiInkqubo yempazamo yamaxabisoumgciniphendula kwakhona